News | जनता समाजवादी पार्टी
News | Tag: जनता समाजवादी पार्टी
संसद् विघटविरुद्धको रिटमाथि अदालमा बहस चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनकः यादव
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार जसपाले आयोजना गरेको ‘सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संसद जीवित भएको भन्दै जसपा नेताद्वारा सभामुखसमक्ष बैठक आह्वान गर्न आग्रह
काठमाडौँ । सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुले संसद बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सभामुख सापकोटलाई भेटेर जसपाका नेताहरुले संसद जीवितै रहेको भन्दै बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
जसपाले संसद विघटनविरुद्ध बुधबारबाट आन्दोलन गर्ने
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संसद विघटनविरुद्ध बुधबारबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले बुधबारदेखि आइतबारसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
पोखरामा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन, ओलीको टिकटक बजारमा नचल्ने सुवेदीको भनाई
पोखरा । पोखरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन भएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै पुत्ला दहन गरेका हुन् । बुधबार चिप्लेढुङ्गाबाट बुधबार नाराबाजीसहित निस्केको समाजवादी पार्टीको जुलुसले महेन्द्रपुलमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।
जसपाद्वारा नेपाल–भारत सीमा खुलाउन माग
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेपाल–भारतको सीमा खुलाउन माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द गरेको नेपाल–भारत सीमा खुलाउन माग गरेको हो ।
समाजवादी पार्टीका नेता भीमप्रसाद गौतमको निधन
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीमप्रसाद गौतमको निधन भएको छ । बिहीबार बिहान ७२ वर्षको उमेरमा गौतमको निधन भएको हो । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ पिप्ले निवासी गौतमको आफ्नै घरमा निधन भएको हो ।
प्रदेश ५ः जनता समाजवादी पार्टीले दाङ राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गर्ने
बुटवल । दाङको देउखुरीमा प्रदेश ५ को राजधानी बनाउने पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मतदान गर्ने भएको छ । दाङमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव वैज्ञानिक ढंगले आएको भन्दै जसपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न लागेको हो ।
बाबुराम भन्छन्ः राष्ट्रियसभालाई निर्लज्ज र चुनाव हारेकाहरूले भरेर रसातलतिर पुर्‍याइँदैछ
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियसभालाई निर्लज्ज र चुनाव हारेकाहरूले भरेर रसातलतिर पुर्‍याइँदै लगेको बताएका छन् । एक ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
जसपाद्वारा सांसद सरिता गिरीको ठाउँमा सिटौला सिफारिस
सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीबाट हटाएपछि जसपाले उक्त स्थानका लागि सिटौलाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो । लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधनमा उनले पार्टीको ह्वीप विपरित मतदान गरेपछि गिरीलाई पार्टीले कारबाही गरेको हो ।
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)बारे पार्टी आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताएको छ । अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताएको हो । यसबारेमा पार्टी छलफलमा रहेको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘यसम्बन्धमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन ।